Zakah pool Calculation
Barnaamijka Zako Dhawr
Sakadu waa tiirka saddexaad ee tiirarka Islaamku ku taagan yahay.
Sakadu waa xaq maaliyadeed oo ku waajiba maal gaar ah, una waajiba cid gaar ah oo sharcigu gooyey, waxa ay leedahay shuruud qeexan oo ay ku waajibto.
Sakadu waxay ku waajibtaa, dhammaan noocyada maalka ee shuruuddeeda waajibnimo waafaqay, sida:
Dahabka iyo Lacagta - (الذهب والفضة والعملات).
Alaabooyinka iyo agabka ganacsi - (عروض التجارة).
Xoolaha nool (الانعام).
Beeraha waxa ka soo go’a - (الزروع والثمار).
Macdanta iyo waxyaabaha qaaliga ah ee la helo - (المعادن والركاز).
Waxa jira noocyo hanti ah oo aanay sako ku waajibin marnaba iyo kuwo kale oo ay xaalado gaar ah uun ku waajibto, xaalado kalena waajibnimadu ka dhacdo.
Shuruudda Waajibidda Sakada, waxa ugu muhiimsan:
Lahaansho buuxda - (الملكية التامة)
Sako Goys (Nisaab) inuu maalku gaadho - (بلوغ النصاب)
Wareegga sannadka – (حولان الحول).
Waxa jira noocyo hantida ka mid ah oo aan shuruudan loo xidhin, waxa kale oo jira shuruud dheeraad ah oo xoolaha sakada qaarkood lagu xidho.
Mac’hdka Beder oo diraasado iyo cilmi-baadhisyo kala duwan ku sameeyay hannaanka sako xisaabinta, bixinta iyo maareynta ee ganacsatada Somaliland, waxa uu ku ogaaday inay jiraan khaladaad baahsan oo sharci, kuwaasoo la xidhiidha:
Qaab xisaabeedka sakada shirkadaha, dhulka, ganacsiga yaryar iwm.
Fahamka qaybaha kala duwan ee hantida ganacsigu ka kooban tahay, saameyntana ku leh ama aan ku lahayn sakada.
Hab-maamulka sakada, gaar ahaan; xuquuqda la xidhiidha shaqaalaha, cashuuraha iyo daynta noocyadeeda kala duwan.
Hadaba ganacsade, adoo maanka ku haya gudashada cibaadada sakada iyo waajibnimadeedaba, waxa muhiim ah inaynnu ku dadaallo sixidda, toosinta iyo tayeynta qaab-xisaabeedka sakada ee ganacsigeenna iyo hantideena.
Mac’hadka Beder waxa uu kaa caawin doonaa inaad si sax ah oo qeexan u xisaabiso sakada, isaga oo kuu suuro gelin doona inaad xisaab xidh dhammaystiran oo hufan una gaar ah sakada ku sameeyso ganacsigaaga iyo hantidaada sako goyska ah ee kale.
Waxa iyana bushaara kale kuu ah, inaanu mac’hadku kugu kallifayn inaad bixiso kharash ka dheeraad ah sakada kugu waajibtay.
Sakada oo wakhtigeeda si sax ah loo bixiyaa waxa ay barakaysaa maalka, tiro ahaan iyo tayo ahaan ba, waxaanay bixiyaha gaadhsiisaa raali ahaansho Rabbi.
© Beder Institute for Research and & Development 2015. All Rights Reserved.